वडाध्यक्ष डंगोलले काठमाडौं महानगरपालिकाको ढोकाको कब्जा नै फुस्किने गरी किन हाने लात्ती ? « News24 : Premium News Channel
वडाध्यक्ष डंगोलले काठमाडौं महानगरपालिकाको ढोकाको कब्जा नै फुस्किने गरी किन हाने लात्ती ?
कार्यालयको ढोकामा लात्ता हान्नुको कारण के ?
दुई वर्षदेखि कामै नगर्ने इन्जिनियर हुँदा पनि आफूले सहेर बसेका वडाध्यक्ष डंगोलले दुई महिनाअघि महानगरसँग माग गरेअनुसार एक जना इन्जिनियर पाएका थिए । तर, अहिले उनले थाहै नपाई त्यस इन्जिनियरको पनि सरुवा गरिएपछि उनी महानगर गएर त्यसबारे गुनासो पोखे । तर, उनको गुनासोबारे ‘माथिको आदेशबमोजिक सरुवा’ भन्ने सुनेपछि उनले सहन सकनेनन् र महानगरको कार्यालयमा गएर लात्ताले ढोकामा हाने ।
अध्यक्ष डंगोलले वडामा इन्जिनियर नहुँदा काम गर्न सास्ती भएको र दुई महिनाअघि आएको इन्जिनियरको सरुवा हुनु वडाबासीमाथि घात भएको भन्दै उनले अन्याय भएको बताएका छन् । उनले वडामा गएर ढोकामा लात हानेर फर्किएको स्वीकारेका छन् ।
वडाध्यक्षले महानगरको ढोकाको कब्जा फुस्काएर अन्य भौतिक क्षति पुर्याएपछि मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले उक्त घटनापछि घटनास्थलको मुचुल्का उठाउन निर्देशन दिएका छन् । तोडफोडबाट भएको क्षति वडाध्यक्ष डंगोलबाटै भराउन मेयर शाक्यले निर्देशन दिएका छन् ।